लाभांश चहलपहल : ८८ कम्पनीले गरे घोषणा, बोनस कि नगद ? (तथ्यांकमा)
काठमाडौ : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत दर्जनौं कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । केही कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश साधारण सभाबाट पारित गरी सेयरधनीको खातामा पनि पठाइसकेका छन् भने कतिपयले पठाउने तयारी गरिहेका छन् ।
अहिलेसम्म कुल ८८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ८ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । यसपटक अधिकांश वित्तीय संस्थाले नगद लाभांशलाई प्राथमिकतामा राखेर लाभांश घोषणा गरेका हुन् । यस्तै, बोनस र नगद दुवै दिने संस्थाहरु पनि उल्लेख्य देखिएका छन् ।
यसपटक विशेष गरी वाणिज्य बैंकहरुले तुलनात्मक रुपमा बोनस सेयरलाई भन्दा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अधिकांश बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । बैंकहरुले पुँजी पुर्याउन विगत २ वर्षमा बोनस सेयर र हकप्रद सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । पुँजी पुगेपछि अब बैंकहरुले नगद लाभांश लाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
विकास बैंकहरुले पनि यसपटक बोनस सेयरलाई भन्दा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता भने नगद लाभांश भन्दा बोनस सेयरमा आकर्षित हुने गरेका छन् । यता, वित्तीय संस्थाले नगदलाई जोड दिएपछि केही हदसम्म सेयर बजार प्रभावित भएको लगानीकर्ताको टिप्पणी छ ।
२३ वाणिज्य बैंकले घोषणा गरे लाभांश, ७ बैंकको नगद मात्रै
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५को नाफाबाट हालसम्म २३ वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन् । यी बैंकहरु मध्ये ७ बैंकले नगद लाभांश मात्रै दिएका छन् ।
वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सबै भन्दा धेरै लाभांश दिएको छ । यसले १८% बोनस र २२% नगद गरी ४०% लाभांश दिएको हो । यता, सिटिजन्स बैंकले भने ३.६२८% बोनस सेयर र १.६३५% नगद लाभांश गरेर जम्मा ५.२६३% लाभांश दिएको छ ।
२३ विकास बैंकको लाभांश घोषण, मुक्तिनाथको सबैभन्दा धेरै
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को नाफाबाट २३ विकास बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । यसमध्ये कतिपयले साधारण सभा गरेर लगानीकर्ताको खातामा नगद लाभांश पठाइसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म घोषणा गरेका मध्ये लाभांशमा सबैभन्दा धेरै काबेली विकास बैंकले ३५% बोनस सेयर दिएको छ ।
त्यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकले १९.२१% लाभांश दिएको हो । यसले १८.२५% बोनस सेयर र ०.९६% नगद लाभांश दिएको हो । २३ विकास बैंक मध्ये ६ वटा बैंकले नगदलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छन् । नगदलाई मात्रै प्रथमिकता दिनेमा भार्गव, सहयोगी, गण्डकी, कैलाश, एक्सेल र ज्योति विकास बैंक रहेका छन् ।
३२ लघुवित्त कम्पनीले प्रस्ताव गरे लाभांश, कसको कति ?
गत वर्षको नाफाबाट हालसम्म ३२ लघुवित्त कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव तथा वितरण गरेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी फरवार्ड कम्युनिटी र सूर्योदय लघुवित्तले ४५% का दरले लाभांश दिंदैछन् ।
यता, नेपाल सेवा लघुवित्तले ५.२%, सिभिल लघुवित्त ७.८९% कालिका लघुवित्त ८.४२% र नागवेली लघुवित्त ९.८७% दिने भएका हुन् ।
१० फाइनान्स कम्पनीको बोनस, सिर्जना फाइनान्सको सबैभन्दा धेरै
गत वर्षको नाफाबाट हालसम्म १० फाइनान्स कम्पनीले लाभांश दिने भएका छन् । घोषणा भएका लाभांशमध्ये सबैभन्दा धेरै सिर्जना फाइनान्सको १५% बोनस सेयर र ९.५% नगद रहेको छ ।
१० फाइनान्स कम्पनीमध्ये ६ वटा फाइनान्स कम्पनीले बोनसलाई भन्दा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नगदलाई प्राथमिकता दिने कम्पनीमा आइसीएफसी, गुहेश्वरी मर्चेन्ट, युनाइटेड, मन्जुश्री, गुडविल र सेन्ट्रल फाइनान्स रहेका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीमा कसको कति लाभांश ?
गत वर्षको नाफाबाट ८ जलविद्युत् कम्पनीले मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । बुटवल पावर कम्पनीले सबैभन्दा धेरै १०% बोनस र १८% नगद गरेर २८% लाभांश दिएको हो । यता, नेपाल हाइड्रो डेभलपरले ४% बोनस सेयर दिने भएको छ ।
साथै, अपि पावर र युनाइटेड मोदीले ५–५% बोनस सेयर दिने भएका छन् । माथि उल्लेख गरिएका कम्पनीहरु मध्ये केहीले लाभांश खातामा पठाइसकेका तथा केहीले पठाउने क्रममा छन् । यसैगरी, केहीको साधारण सभा नै हुन पनि बाँकी छ ।